निशानको बिहे तर अ’चानक! भा’वुक हुँदै युवती मिडियामा “I love you निशान बिहे हुदैमा माया घ’ट्दैन” बिहेको फोटो देख्दा मुटु दु’ख्यो, आखिर के थियोे त! (भिडियो हेर्नुहोस) – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/निशानको बिहे तर अ’चानक! भा’वुक हुँदै युवती मिडियामा “I love you निशान बिहे हुदैमा माया घ’ट्दैन” बिहेको फोटो देख्दा मुटु दु’ख्यो, आखिर के थियोे त! (भिडियो हेर्नुहोस)
यस्तो छ तपाईको मङ्गलबारको भाग्य! पौष २० गतेको आफ्नो राशिफल हेर्नुहोस्
भाँचिएको खुट्टामा राखेको रड निकाल्दा बिरामीको मृत्यु भएपछि चिकित्सकलाई कारबाही गर्ने सहमति